Zụta Bitcoin na China ozugbo na nchebe | Paxful
Zụta ma Ree Bitcoin (BTC) na China
Tinye ego na Bitcoin n'ụzọ dị mfe na nchekwa. Paxful bụ ebe kachasị mma iji zụta, ree ma zipụ Bitcoin ihe karịrị ụzọ 300 iji kwụọ ụgwọ maka Bitcoin gụnyere inyefe ụlọ akụ na WeChat Pay!
Gbanwee gaa na asusu Chinese (简体中文(SC))
Ezigbo ọnụahịa—Enwere ike ịchọ ID
Ihe karịrị ụzọ 300 ịkwụ ụgwọ
Họrọ usoro ọkwụkwụụgwọ kacha elu na China. Ma ọ bụ chọta ụzọ ọ bụla ọzọ ịkwụ ụgwọ site na nhọrọ n'okpuru usoro kachasị elu.
2. Pịnye ego iji mefuo
Ọnụọgụgụ na Yuan (Chinese) Renminbi
Jiri WeChat Kwuo ụgwọ
1. Họrọ WeChat Pay ma pịnye na onuogugu Bitcoin ị chọrọ. Òreè ga enyere gị aka itinye ego na akpa ego Paxful Bitcoin gi.
2. Soro ntuziaka ha nyefee ego. Iji WeChat Pay bụ ụzọ kachasị ọsọ ma dị nchebe iji zụta Bitcoin na China.
3. Ozugbo emere mbufe a, pịa bọtịnụ "akwụgoro m" ma chere ka onyere ihe hapụ gị Bitcoin.
4. Bitcoins dị ozugbo na akpa ego Paxful gị ma enwere ike izipu ya ebe ọ bụla n'ụwa ozugbo.
1. Họrọ Nyefee National Bank ma pịnye na ego ị ga emefu n'elu. Òreè ga enyere gị aka itinye ego na akpa ego Paxful Bitcoin gi.
2. Soro ntuziaka ha nyefee ego site na akaụntụ akụ gị n'aka òreè ya. ENWEGHỊ ỊKWỤ ỤGWỌ IJI QUICK TELLER, ENWEGHỊ NYEFEE EGO ATM.
3. Ozugbo emere mbufe ahụ, Pịa bọtịnụ "A kwụọla m" ma chere ka òreè hapụ Bitcoin.
4. Bitcoin ga dị ozugbo na akpa ego Paxful gị ma enwere ike izipu ya ebe ọ bụla n'ụwa ozugbo.
Ọ bụrụ n ’ịhọrọ iji kaadị onyinye zụta Bitcoin dị ka Kaadị Onyinye Amazon mgbe ahụ ị ga eji EGO NKỊTỊ NAANI azu ha. Ndị ọrẹ ahịa anyị chọrọ foto akwụkwọ akwụmụgwọ tupu ha enwee ike inye gị Bitcoin.
1. Gaa zuta kaadị onyinye iji ego nkịtị n'aka ụlọ ahịa dị n’obodo gị ma ọ bụ kaadị onyinye dị na ntanetị naAmazon.com.
2. Họrọ usoro ọkwụkwụụgwọ dị n'elu wee pịnye ego ole ị nwere na kaadị wee pịa "Zụta Bitcoin ugbu a". Ohere ohuru ga emepe nwere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa Paxful ahọpụtara (onyinye kacha mma).
3. Gụọ site na iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ma bido ịzụ ahịa. Bulite foto nke azụ kaadị ahụ akpochapụrụ na akwụkwọ akwụmụgwọ. Jide n'aka na ị ga ebu ụzọ mee kaadị ahụ rụọ ọrụ! Pịa bọtịnụ "A kwụọla m" ma chere ka òreè hapụ Bitcoin.
Nyere ndị China aka inweta Bitcoin ma ị nwere ike irite NNUKWU uru ruo 60% na ahia ọ bụla. Bido ire ahia gị na akaụntụ WeChat Pay ma ọ bụ akaụntụ ụlọ akụ Chinese ugbu a! Lee nduzi anyi n’efu. Paxful na enweta 1000 nke ndị na azụ ahịa Bitcoin si China kwa ụbọchị.
Mara ọtụtụ ndị chọrọ ịzụta Bitcoin na China? Site na obere ụlọahịa Bitcoin na Onye Mmekọ programụ ị ga enweta 2% na azụmaahịa ọ bụla ruo mgbe ebighi ebi site na ịkekọrịta njikọ. Bido ugbua.
Bitcoin bụ akụ dijitalụ na usoro ọkwụkwụụgwọ. Paxful na eme ka ọ dị mfe ịzụta ma ree Bitcoin na WeChat Pay, nnyefe ụlọakụ na kaadị onyinye. Bitcoin abụrụla ihe bara uru na ụwa dijitalụ anyị. Ị nwere ike iche banyere ya dịka ọla edo ntanetị. Dị ka ọla edo, ọnụahia Bitcoin na aga n'ihu na enwoghari ma ọ ga ahụ mmụba na ọnụego Bitcoin, ọkachasị mgbe oge akụ na ụba na emebi emebi.